Jesu, Mambo Asina Mhosva Anotambura Ari Padanda | Upenyu hwaJesu
MATEU 27:33-44 MAKO 15:22-32 RUKA 23:32-43 JOHANI 19:17-24
JESU ANOROVERERWA PADANDA REKUTAMBUDZIKIRA
CHIKWANGWANI CHINOISWA PAMUSORO PAJESU CHINOITA KUTI AZVIDZWE
JESU ANOPA TARIRO YEKURARAMA MUPARADHISO PASI PANO
Jesu anoendwa naye kune imwe nzvimbo iri pedyo neguta, kwaachanourayiwa pamwe nemamwe makororo maviri. Nzvimbo iyi inonzi Gorogota, kana kuti Nzvimbo yeDehenya, uye inzvimbo inogona kuoneka munhu ari “kure zvishoma.”—Mako 15:40.
Varume vatatu vatongerwa rufu vanokumurwa nguo dzavo. Vanobva vapiwa waini yakaiswa mura nenduru inovava. Kunenge kuti waini iyi, iyo inoita kuti munhu asanyanye kurwadziwa, yagadzirwa nevakadzi vemuJerusarema, uye vaRoma havarambidze kuti vanhu vanenge vava kuurayiwa vaipiwe. Asi Jesu paanongoiravidza, anoramba kuinwa. Nechikonzero chei? Haasi kuda kuti pfungwa dzake dzivhiringidzike pakutarisana nemuedzo uyu mukuru; ari kuda kuramba akamuka akatendeka kusvika parufu.
Jesu anoradzikwa padanda. (Mako 15:25) Masoja anobva arovera zvipikiri mumaoko ake nemutsoka, vachibvoora nyama yake nemarunda zvokuti anorwadziwa zvikuru. Danda racho parinomiswa, kurwadziwa kwacho kunobva kwawedzera sezvo kurema kwemuviri wake kuchiita kuti maaboorwa muwedzere kubvaruka. Asi Jesu haatuki masoja aya. Anonyengetera kuti: “Baba, vakanganwirei, nokuti havazivi zvavari kuita.”—Ruka 23:34.
VaRoma vane tsika yekuisa chikwangwani chinoratidza mhosva yemunhu anenge atongerwa rufu. Izvi ndizvo zvinoitwa naPirato. Anoturika chikwangwani chakanzi: “Jesu wokuNazareta Mambo wevaJudha.” Chanyorwa muchiHebheru, chiLatin uye nechiGiriki kuitira kuti munhu wose akwanise kuchiverenga. Zvinoitwa naPirato izvi zvinoratidza kushora kwaari kuita vaJudha vaomesa musoro vachida kuti Jesu aurayiwe. Vapristi vakuru vanosvotwa nazvo voti: “Musanyora kuti ‘Mambo wevaJudha,’ asi kuti akati, ‘Ndiri Mambo wevaJudha.’” Asi Pirato haasi kuda kushandiswa navo zvekare saka anoti: “Zvandanyora ndanyora.”—Johani 19:19-22.
Vapristi avo vakaguta nehasha vanodzokorora mashoko avambotaura vachipa uchapupu hwenhema pamberi pedare reSanihedrini. Hazvishamisi kuti vanhu vanopfuura nepo vanobva vatangawo kumunyomba vachidzungudza misoro yavo vachiti: “Tsvatu waro! Iwe wokuda kuputsa temberi woivaka mumazuva matatu, chizviponesa nokuburuka padanda rokutambudzikira.” Vapristi vakuru nevanyori vanotauriranawo vachiti: “Kristu Mambo waIsraeri zvino ngaaburuke padanda rokutambudzikira, kuti tione, titende.” (Mako 15:29-32) Kunyange nemakororo maviri akarovererwa kuruboshwe nekurudyi kwaJesu vanomunyomba, ivo vari ivo vatori nemhosva dzavapara.
Masoja mana evaRoma anotangawo kumutsvinyira. Vanofanira kunge vanga vari kunwa waini inovava, saka vanomutsvinyira vachiita sevari kuda kumutambidza ivo vachiziva havo kuti haakwanise kuitambira. VaRoma vanotangawo kutaura nezvechikwangwani chiri pamusoro pake vachimuseka vachiti: “Kana uri mambo wevaJudha, zviponese.” (Ruka 23:36, 37) Pafunge! Murume anyatsoratidza kuti ndiye nzira, nechokwadi neupenyu ndiye ava kunyombwa nekubatwa zvisina kunaka kudai pasina chaaita. Kunyange zvakadaro, anoitirwa zvese izvi asingatombotuki vaJudha vakamutarira, masoja evaRoma ari kumutsvinyira, kunyange makororo maviri atongerwa rufu akaturikwawo pamatanda.
Masoja mana aya anotora nguo dzaJesu dzekunze otanga kudzigovana. Vanokanda mijenya kuti vaone kuti ndiani otora ipi. Asi nguo yaJesu yemukati ndeyemhando yepamusoro, “isina musono, . . . yakarukwa kubva kumusoro kusvikira pasi.” Masoja acho anotanga kutaurirana achiti: “Ngatiregei kuibvarura, asi ngatisarudzei nemijenya pamusoro payo kuti ichava yaani.” Vanobva vazadzisa rugwaro runoti: “Vanogovana nguo dzangu, Vanokanda mijenya pazvipfeko zvangu.”—Johani 19:23, 24; Pisarema 22:18.
Nokufamba kwenguva, mumwe wemakororo anozoona kuti zvechokwadi Jesu anofanira kunge ari mambo. Anotsiura mumwe wake nemashoko okuti: “Haumbotyi Mwari here, zvino zvawava pakutongwa kwakafanana? Chokwadi, isu zvakatikodzera, nokuti tiri kugamuchira zvakakwana zvakatikodzera nokuda kwezvinhu zvatakaita; asi murume uyu hapana chaakaita chisina kukodzera.” Anozokumbira Jesu kuti: “Mundiyeukewo kana mapinda muumambo hwenyu.”—Ruka 23:40-42.
Jesu anomupindura kuti: “Chokwadi ndinokuudza nhasi, uchava neni,” kwete muUmambo, asi kuti “muParadhiso.” (Ruka 23:43) Vimbiso iyi yakasiyana neyakapiwa naJesu kuvaapostora vake yokuti vaizogara pazvigaro naye muUmambo. (Mateu 19:28; Ruka 22:29, 30) Asi gororo rechiJudha iri rinogona kunge rakanzwa nezvemusha weParadhiso wakanga wapiwa Adhamu naEvha nevana vavo pakutanga. Saka iye zvino rava kufa riine tariro iyoyo.
Jesu anorambirei kunwa waini yaanopiwa?
Pamusoro paJesu panoiswa chikwangwani chinotii, uye vaJudha vanotii nemashoko acho?
Uprofita hunozadziswa sei pane zvinoitika kunguo dzaJesu?
Jesu anopa mumwe wemakororo tariro yei?
Vakawanda vanoti muchinjikwa ndicho chiratidzo chevaKristu. Tinofanira kuushandisa pakunamata here?